प्राचीन ग्रीक चिकित्सकहरु आधुनिक मनोरोग समानुभूति गर्न सक्नुहुन्छ: hysterical neurosis निदान भएका विरामीहरु को संख्या, यो थप र थप बन्नेछ। लामो समय को लागि जानिन्छ यो रोग बारे यद्यपि, को पाठ्यक्रम, यो हाम्रो समय मा पूर्ण बिभिन्न कोण अन्तर्गत देखेको र यो एक अलग अर्थ दिन छ।
पुरातन युनानी अनियन्त्रित उतेजना को कारण यौन dissatisfaction छ कि विश्वास गरे। त्यसैले मनोविश्लेषण गरेको विचार छैन मूल थिए। र feminists तिनीहरूले रोग महिला धेरै राम्रो कहिलेकाहीं छ कि विश्वास को रूप मा, युनानी द्वारा धेरै आहत थियो। आजकल, पुरुषहरु मा रोग को धेरै अवस्थामा छन्।
रोग को "hysterical neurosis" को आधुनिक psychopathology कारण यो विक्षिप्त गर्न सकिन्छ कि व्यक्तिगत परिस्थिति परहेज को एक अस्वस्थ तरिका मानिन्छ। निस्सन्देह, हामी सबै दुखाइ टाढा प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुहोस्, तर tantrums यो प्राय र अरूले भन्दा सफलतापूर्वक गर्छन्। विविध को बचाउ लागि विधिहरू, तिनीहरूले एक व्यक्ति को व्यक्तिगत अनुभव प्रतिबिम्बित। चिकित्सा हालै अनियन्त्रित उतेजना को मूल कारण बुझ्न आएको छ किनभने सामान्य मा, हाल सम्म यो को निदान, शायद उठायो। अब, यो निदान थप र थप साहसी छ।
सामान्यतया, psychiatrists अनियन्त्रित उतेजना दुई प्रकारका काम गर्न छ। रूपान्तरण र dissociative। यसरी Hysterical neurosis धेरै फरक तरिकामा प्रकट गर्नुभयो।
रोग को पहिलो प्रकार शारीरिक लक्षण को उजुरी सम्बन्धित छ, त्यो छ, व्यक्ति केही असामान्य sensations शरीर, दुखाइ मा त मा अवलोकन र। र उहाँले धोखा छ, यो साँच्चै खराब छ, त्यसैले हामी hysterics र malingerers पहिचान गर्न सक्दैन। अनियन्त्रित उतेजना झुकाउ भएका मान्छे, कहिले काँही आविष्कार गर्न चाहनुहुन्छ हुनत। लक्षण तिनीहरूले गहिरो-विराजमान मनोवैज्ञानिक कारणहरू छन् रूपमा। यी मानिसहरू अक्सर अक्सर रहस्यमय र चाखलाग्दा लक्षण को गुनासो गर्ने अन्य डाक्टर, छैन psychiatrists, धेरै परीक्षा पास। हुनत ज्यादातर लक्षण विशिष्ट हो:
दौरा शामिल अन्य अगाडि (अक्सर दौरा शामिल जस्तै रोगी धेरै उज्ज्वल र expressive व्यवहार हेर), र रोगी अक्सर फिट गर्न चाहनुहुन्छ गर्दैन;
Hypersensitivity वा यसको हानि;
तनावपूर्ण अवस्थामा नै स्थिति सख्त;
छवि, तीन-आयामी दृष्टि विकार, देखिन्छ र गायब वस्तुहरु को धमिलो एक दोहरीकरण; लक्षण Spotting
पूर्ण सुनुवाइ गर्न निर्वाचन देखि, हानि सुनेपछि;
आंत लक्षण: dyspnea, वाकवाकी, को घाँटी मा गांठ, खोकी कारण बिना;
झूटा गर्भावस्था: एक महिला रोक्छ menstruating, पेट बढ्ने उनको बिरामी को बिहान, र बढेको छाती मा। हुनत गर्भावस्था छैन।
सामान्यतया, यी लक्षण रोगी बच्न रुचि थियो जसमा परिस्थितिमा उत्पन्न र यो भावना सामाजिक स्वीकार्य लक्षण देखा पर्न सुरु ताकि बलियो छ।
यस अवस्थामा, त्यहाँ इच्छा र आवश्यकता बीच निहित द्वन्द्व छ। Hysterical neurosis रोगी छैन भइरहेको छ के को लागि जिम्मेवारी लिन चाहने, आफ्नो बलियो इच्छा निम्नानुसार भन्ने तथ्यलाई द्वारा प्रकट गर्नुभयो। उहाँले यो scares वा रिस उठाउँछ भन्ने बिर्सनुहुन्न। निस्सन्देह, यो hysterical स्मृति लोप र स्मृति लोप मस्तिष्क को disturbances सुनेपछि बीच भेद गर्न आवश्यक छ। दोस्रो अवस्थामा, भण्डारण र जानकारी को संग्रह को असामान्य प्रक्रिया। को छनौट स्मृति सम्बन्धित एक hysterical स्मृति लोप। त्यो साँचो जानकारी एक व्यक्ति छ, तर यसले सुरक्षित अचेत को भुमरीमा लुकेको छ र सतह यसलाई ल्याउन धेरै गाह्रो हुन सक्छ। केही psychiatrists को घटना संग सम्बन्धित अनियन्त्रित उतेजना छ धेरै व्यक्तित्व को। त्यो भन्दा छ विभाजन व्यक्तित्व एक व्यक्ति अन्य अस्तित्व बारे थाहा जब, एकै समयमा, त्यहाँ जो व्यक्ति केहि सम्झना छैन समय अवधि हो।
कसरी neurosis छुटकारा गर्न? पहिले, तपाईं रोगी भएको अधिकतम तनाव के गराउँछ पहिचान गर्न आवश्यक छ। तपाईं मौलिक गतिविधिहरु को स्कोप परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, रोगी आफूलाई भित्र यसलाई चलाउनु तनाव संग र काम गर्न सिक्नुपर्छ। तेस्रो, सिफारिस मध्यम गहन दीर्घकालीन व्यायाम।
यो सम्भव छ neuroses निको पार्न Homeopathy? परम्परागत चिकित्सा को एक समर्थक रूपमा, म जवाफ - छैन। तथ्यलाई कुनै "जादू गोली" मूल समस्या समाधान गर्न सक्दैन छ भन्ने छ। को placebo प्रभाव रोग अस्थायी रूपमा हटाउनुहोस् गर्न सक्नुहुन्छ कारण। तर त्यो फिर्ता हुनेछ। त्यसैले यसलाई संग मनोचिकित्सा र दबाइ न्यूनतम प्रयोग उपचार गर्न राम्रो छ।
को भावनात्मक सुस्ती के हो?
कसरी व्यक्तिलाई उदासीनताबाट बाहिर निकाल्न मदत गर्ने
मुड swings र तिनीहरूलाई कसरी लड्न
दबाइ "एस्पिरिन" के बाट? मुखासे विरुद्ध लड्न ट्याब्लेटको "एस्पिरिन" कसरी प्रयोग गर्ने
सार "द Stationmaster" रूप Pushkin
घर उपचार herniated डिस्क। सर्जरी बिना herniated डिस्क को उपचार
सडक लिज्योवावाबाट काटिनका लागि स्मारक - रूसमा पहिलो
ओवनमा बगाल तयार पार्नुहोस्!